Ma dhaba in Madaxweyne Farmaajo oo dib u celiyey jinsiyaddiisii labaad ee Mareykanka? – Xeernews24
Ma dhaba in Madaxweyne Farmaajo oo dib u celiyey jinsiyaddiisii labaad ee Mareykanka?
1. August 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta ku dhowaaqay inuu celiyey jinsiyaddiisa labaad ee uu ka haystay dalka Mareykanka.
Hoos ka aqriso qoraal arrintan ku saabsan oo kasoo baxay Villa Soomaalia
Maanta oo ay taariikhdu tahay 1-da Ogoosto, 2019, waxaan si rasmi ah idiinla wadaageynaa in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed uu celiyay jinsiyaddiisii labaad ee uu ka qaatay dalka Mareykanka.
Madaxweyne Farmaajo wuxuu ku noolaa dalka Mareykanka muddo dheer isaga oo ka kororsaday aqoon iyo khibrado shaqo oo kala duwan, wuxuuna Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka noqdoy Ra’iisul Wasaare sannadkii 2010.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/08/farmaajo.jpg 371 660 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-08-01 11:14:382019-08-01 11:14:38Ma dhaba in Madaxweyne Farmaajo oo dib u celiyey jinsiyaddiisii labaad ee Mareykanka?
CODSII IYO TALO NOLOSHA SHACABKA GOBOLKA SIITI LAGU BADBAADINAAYO. Dugsiga Farsamadda Gacanta oo Maanta la Dhagax Dhigey magaalada Ayshaca (Sa...